ပျံသန်းနေသောခွပ်ဒေါင်းတကောင်: 11/1/09 - 12/1/09
Gtalk virus အသစ်ကိုသတ်နည်း
gtalk virus တစ်ကောင်တွေ့လိုက်လို့ပါ။ chrome ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ သတ်တာကလဲတော်တော်လေးလွယ်တယ်.
နောက် virus က gtalk ပုံစံအတုလုပ်ထားတာဆိုတော့တော်တော်များများကမရိပ်မိကြပဲ user name password တွေကိုရိုက်ထည့်တတ်ကြလို့ပါ။ virus နာမည်က googleserv.exe ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ virus အကူးစက်ခံရတဲ့စက်မှာဆိုရင် virus က \_Program Files\_Google\_Google Talk ထဲက googletalk.exe ကိုဖျောက်ပြီး gtalk.exe(virus) တစ်ခုထားခဲ့ပါတယ်။ နောက် desktop ပေါ်က Google Talk shortcut ကိုလဲ target မှာ gtalk.exe ကိုညွှန်လိုက်ပါတယ်။ Shortcut ကိုနှိပ်တဲ့အခါ virus ကို runမိသွားပြီး Gtalk windows အတုပေါ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာကိုယ်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ data တွေကိုမှတ်သွားပြီး pen drive ထဲကို sys/computername.nfo ဖိုင်အနေနဲ့ထည့်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတော့နားမလည်ပါ။ nfo ကို edit လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အထဲမှာ [username] နဲ့ set=0x(numbers) ဆိုတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ password ကိုတော့ encrypt လုပ်ထားပုံပါပဲ. ဒါပေမဲ့ စာလုံးရေကိုတော့ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ဟန်တူပါတယ်။
User name password ရိုက်ပြီးသွားလို့ enter ခေါက်လိုက်ရင် connect လုပ်နေပုံပြပြီး error box ကျလာပါမယ်။ OK နှိပ်လိုက်ရင်တော့ သူ့ window ပိတ်သွားပြီး တကယ့် gtalk ပွင့်လာပါမယ်။
ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ သင့် user name ကသူမှတ်ထားတဲ့စာရင်းထဲပါသွားပြီဆိုတာသတိပြုပါ။
virus ကိုဖွင့်မိထားတာလား ဘယ်လိုသိမလဲ?
လွယ်ပါတယ်။ Virus ကိုဖွင့်မိထားတာဆိုရင် taskbar က gtalk icon ဟာ sign-in မ၀င်ရသေးပဲနဲ့ အဖြူရောင်ဖြစ်နေပါမယ်။ pointer ထောက်ကြည့်ရင် Google talk လို့ပေါ်ရမယ့်အစား Gtalk.exe လို့ပေါ်ပါမယ်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ သူ့ window မှာ check box (remember password) တွေဘာတွေကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ user name password ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ text area တွေက အညိုရောင်ပြောင်းပြီး connecting ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါမယ်။
Desktop ပေါ်က shortcut မှာ gtalk.exe အစား googletalk.exe လို့ပြန်ပြောင်းရိုက်ပါ။
\_Program Files\_Google\_Google Talk ကိုသွားပြီး Gtalk.exe ကိုဖျက်လိုက်ပါ။
ဒီ virus ကကူးစက်နှုန်းမမြန်ပါဘူး။ ဆိုင်တွေမှာလဲတွေ့ရခဲပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင် ရှောင်ရှားနိုင်ကြစေဖို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ပေးပို့သူ - မောင်လေး
( မျိုးချစ်မြန်မာ )
Posted by flyingpeacock at 7:44 PM 1 comments Links to this post
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေရ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေရတယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ ဆန္ဒပြပွဲ အရေးအခင်းကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများရဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ အဆမတန် မိုးထိုးအောင် တက်နေလို့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုကြောင့် တခြား နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများနဲ့ အတူ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို ရုံးတင်ပြီး ထောင်ဒဏ် ၆၇ နှစ်ချကာ ဝေးလံသီခေါင်တဲ့ အစွန်အဖျားဒေသရှိ အကျဉ်းထောင်ကို ပို့ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတာ ခံရတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂,၂၀၀ ထဲမှာ ကိုမင်းကိုနိုင်လည်း ပါဝင်ပြီး သူတို့ကို လွှတ်ပေးဖို့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများက တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရက သူတို့ကို ဆန့်ကျင်ပြောဆို လှုပ်ရှားလာရင် နည်းနည်းလေးမှ သည်းမခံဘဲ အင်အားသုံးကာ အကြီးအကျယ် နှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ သတင်းများမှာ ထောက်ပြ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်ဆင်မှု လျှောက်လဲချက် ရှေ့နေနှင့် ညှိနှိုင်း
နေအိမ်မှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးချုပ်မှာ ပြင်ဆင်မှု တင်ထားတဲ့ကိစ္စကို ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် အမှုကို လိုက်ပါ အကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေတွေ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ပြန်ထွက်လာတဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကို မသင်းသီရိက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အဓိကကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုနဲ့အတူ နေအိမ်မှာ အတူရှိနေတဲ့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနဲ့ ဒေါ်ဝင်းမမတို့ အမှုတွေအတွက်ပါ တရားရုံးချုပ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပြင်ဆင်မှုရဲ့ လျှောက်လဲချက်တွေအတွက် ဒီနေ့ညနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်မှာ ရှေ့နေတွေနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို NLD ပြောခွင့်ရသူလည်းဖြစ်၊ အမှုအတွက် အကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“အဓိကတော့ ကျနော်တို့ တရားရုံးချုပ် တင်ထားတဲ့ ပြင်ဆင်မှုကိစ္စ၊ ပြင်ဆင်မှုမှာ လျှောက်လဲချက်ပေးဖို့ ကျနော်တို့ရေးတားတဲ့ စာကြမ်းတွေနဲ့ ညှိကြပါတယ်။ နှစ်ခုပေါ့၊ တခုက ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့ နှစ်ယောက်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တမှုပါ။ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့က တမှုပါ။ နှစ်မှုစလုံးအတွက် ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးကြတယ်။အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ အပြည့်အစုံ ဆွေးနွေးပြီးတော့ လျှောက်လဲချက်တွေ ပြန်ပြီး ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ရမှာပေါ့။”
ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက အမှုရဲ့ ဘယ်လို အချက်အလက်တွေပေါ်မှာ အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသလဲလို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို မေးကြည့်တော့ သူက…
“ဒါ ဥပဒေအရ ဒီအမှုဟာ ရပ်တည်မှု မရှိတော့ဘူး ဆိုတာကို ချဉ်းကပ်ပုံ ချဉ်းကပ်နည်းတွေပေါ့၊ ဘယ်အချက်ကို ပြောမယ်၊ ဘယ်အချက်ကို မပြောတော့ဘူးဆိုတာ ဆွေးနွေးကြတာပါ။ ချက်ချင်း ကျနော်တို့ ပြောလို့မရဘူး။ ကျနော်တို့ဘက်က Prepare ဖြစ်မှ တွေ့ရမှာ။ အခု ဒီနေ့ ဆွေးနွေးတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ရမှာတွေ ရှိတယ်လေ။ ဒါတွေပြီးမှ ကျနော်တို့က ပြန်တင်ပြရမှာ။ တဘက်ကလည်း တရားရုံးချုပ်မှာ အမှုစာရင်းက မပေါ်သေးဘူး။ မနက်ဖြန် ပေါ်ကောင်း ပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့။”
အခုလို အမှုရဲ့ လျှောက်လဲ ပြင်ဆင် ဆွေးနွေးမှုတွေအပြင် တခြား အကြောင်းအရာတွေလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေး ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့က ဆွေးနွေးခဲ့တာ ဒီအမှုအပြင် ဒီ့ပြင် အများကြီး ဆွေးနွေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပါတီတွင်း ကိစ္စတွေတော့ ဆွေးနွေးတာ ရှိပါတယ်။ ဒါလည်း သတင်းထုတ်ပြန်စရာ အချက်အလက် မပါပါဘူး။”
ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးမှာ ပုံမှန်ဆိုရင် သောကြာနေ့တိုင်း အမှုတွေကို စစ်ဆေးမယ့်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်တာမို့ မနက်ဖြန်မှာ ဒီအမှုစာရင်း ပါမပါ စောင့်ကြည့်နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့က သောကြာနေ့တိုင်း အမှုစာရင်းကို ကြည့်မယ်။ ကိုယ့်အမှုပါတယ်၊ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်ဆိုရင် အဲဒီအမီ ကိုယ့်ဘက်က Prepare လုပ်ရတာပေါ့။ အခုကတော့ မပေါ်သေးတော့ ပုံမှန်ပဲလုပ်နေတာ။ ပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့လည်း အားချင်းလုပ်ရမှာပေါ့။ အဲဒါ မနက်ဖြန် ကြည့်ရမယ်။ မနက်ဖြန် မပါရင် နောက်တပတ် သောကြာ ကြည့်ရမယ်။ တင်ဖို့ကတော့ ဒေါ်စု ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အချက်တွေအပေါ်မှာ ပြင်ဆင်ရေးသားပြီး တင်ရမှာ။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကို အကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့နေတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဦးကြည်ဝင်း အပါအ၀င် ကျန်ရှေ့နေ ၂ ဦးစလုံးပါ ဒီနေ့ညနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျန်းမာရေး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရှိနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
နောက်တခါ ဒီလပိုင်းအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီကို ပေးပို့ခဲ့တဲ့ စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုင်တွေဘက်က တစုံတရာ ခုချိန်ထိ အကြောင်းပြန်တာ မရှိသေးသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီကိစ္စကို ဘာမှ ထပ်ပြောလိုက်တာ မရှိဘူးလို့လည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 9:46 PM0comments Links to this post
အကူအညီတွေ ထိရောက်ပါရဲ့လား… ( ဖြူဖြူသင်း)
ဒီလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတိုင်း ချီးမွမ်း ထောမနာပြု၊ သူရဲကောင်း တယောက်လို ဆက်ဆံနေတာဟာ မြန်မာပြည် မှာတော့ အတော့်ကို လွဲမှားနေတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အလှူရှင်တွေလည်း သတိရှိရှိ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပါလို့ ကျမ အလေးအနက်ထား သတိပေး ပြောဆိုလိုက်ရပါတယ်။ http://phyuphyuthin.blogspot.com/
နာဂစ် အကူအညီပေးသူတွေ ပြန်လွှတ်ဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တောင်းဆို
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရသူတွေကို အကူအညီပေးဖို့ ကြိုးစားသူတွေအပေါ် စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီး အရေးယူ နေတဲ့အတွက် ဒီလို ဖိနှိပ်မှုတွေ ရပ်တန့်အောင် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်တွေ အနေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းဖို့ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ကြီးက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရတာ ၁၈ လလောက် ရှိခဲ့ပေမဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အကူအညီတွေ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေ လုံလုံလောက်လောက် ပေးဖို့လည်း နိုင်ငံတကာကို မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ကိုသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မနက်ဖြန် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ အာဆီယံ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့က ကြီးမှူးပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ နာဂစ်မုန်တိုင်းလွန်ကာလ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံတကာကနေ အလှူငွေတွေ ဆက်လက်တောင်းခံဖို့ အစည်းအဝေးတခု ကျင်းပဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီအစည်းအဝေး မတိုင်ခင် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်တွေကို Amnesty International အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ကြီးက ပန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ကြီးရဲ့ မြန်မာ့ရေးရာ သုတေသနမှူး တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘန်ဂျမင် ဇာဝက်ကီး (Benjamin Zawacki) က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ စိုးရိမ်မိတဲ့အချက် နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ တချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရတဲ့သူတွေကို အကူအညီပေးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ သူတွေအပေါ် အာဏာပိုင်တွေက ပစ်မှတ်ထားပြီး ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေ လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒုတိယ တချက်ကတော့ နာဂစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဟာ တကယ်တမ်း ငွေကြေး လုံလုံလောက်လောက် အကူအညီတွေ နိုင်ငံတကာကနေ မရတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီနှစ်ချက်ကို အလေးအနက်ထားဖို့ နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်တွေကို အသိပေးတာပါ။” ဆိုပြီး ဘန်ဂျမင် ဇာဝက်ကီးက ပြောသွားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ နောက်ပိုင်းမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရတဲ့သူတွေကို အကူအညီပေးဖို့ ပြည်ပက အကူအညီ လက်ခံခဲ့တဲ့သူ အနည်းဆုံး ၁၀ ယောက် အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ Amnesty International အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ ဒီလို ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ သူတွေကို ဘယ်မှာထားတယ်၊ ဘယ်လို အရေးယူ တရားစွဲဆိုထားတယ် ဆိုတာ တိတိကျကျ မသိရပေမဲ့ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က တဆင့် ရရှိခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဘန်ဂျမင် ဇာဝက်ကီးက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
အောက်တိုဘာလကုန် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ ၇ ယောက်ဟာ ပြည်တွင်းမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး လူမှုထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လင်းလက်ကြယ်အဖွဲ့က ဖြစ်တယ်လို့လည်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့က ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နာဂစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာ ၃ နှစ်အတွက် အလှူငွေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၆၉၁ သန်း လိုအပ်တယ်လို့ TCG ခေါ် ကုလသမဂ္ဂ၊ အာဆီယံနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ပေါင်းစည်းထားတဲ့ နာဂစ် ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ထူထောင်ရေး သုံးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဒေါ်လာ ၁၂၅ သန်းသာ ပေးဖို့ ကတိက၀တ် ပေးထားတဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီရဲ့ လေးပုံတပုံတောင် ပြည့်မီအောင် ရတာ မတွေ့ရပါဘူး။
အလှူရှင်နိုင်ငံတွေက ဘာကြောင့် အကူအညီတွေ အပြည့်အ၀ မပေးတာလို့ မြင်ပါသလဲဆိုပြီး မေးကြည့်တော့ ဘန်ဂျမင် ဇာဝက်ကီးက …
“နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း အကြားမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီ ငွေတွေကို အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို အပြည့်အ၀ ရောက်အောင် မပို့နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ မြင်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီတွေကို စစ်တပ်က ကြားဝင်ပြီး ဟန့်တားတာ၊ ရယူတာတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ မြင်နေတာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။
“ဒီအခြေအနေမျိုးတွေ မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ ကျနော်တို့က ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အတိုင်းအတာ တခုအထိ ဆက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကူအညီတွေ အမှန်တကယ် လိုနေတယ်။ ထင်သာမြင်သာရှိပြီး တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိတဲ့ အကူအညီ ပေးမှုမျိုးတွေနဲ့ ဆက်ထောက်ပံ့ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့က ပြောတာပါ။” ဆိုပြီး Amnesty International အဖွဲ့ကြီးရဲ့ မြန်မာ့ရေးရာ သုတေသနမှူး တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘန်ဂျမင် ဇာဝက်ကီးက ပြောသွားပါတယ်။
နာဂစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်း အာဆီယံနဲ့ ကုလသမဂ္ဂက မကြာခဏ ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ အတွင်းမှာပဲ အမေရိကန် အစိုးရက နာဂစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အစိုးရလက်အောက်ခံ မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့တွေကဆင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေကတော့ ဘ၀ရပ်တည်ရေးနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ အထောက်အပံ့ ရန်ပုံငွေအတွက် ဒေါ်လာ ၅၁ သန်း ပေးဖို့ သဘောတူထားပါတယ်။ သြစတြေးလျ နိုင်ငံကလည်း ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း အကူအညီပေးဖို့ ဒီသီတင်းပတ်ထဲမှာပဲ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
ဦးဝင်းတင် ၊ ဦးအေးသာအောင် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင်)၏ ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ ပေးပို့သည့် သ၀ဏ်လွှာ
မြန်မာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ကုလ ရှုတ်ချ
ဒီလို အဆိုပြုချက်မျိုးကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက အရင်ကလည်း မကြာခဏ ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါဟာ non-binding resolution လို့ခေါ်ပါတယ်။ အတင်းအကျပ် လိုက်နာစေရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပြဌာန်းချက်မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလို ပြဌာန်းချက်ဟာ သိပ်ပြီးတော့ အရေးမပါဘူး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြဌာန်းလာခဲ့၊ ချမှတ်လာခဲ့ပေမယ့် ဘာမှမထူးဘူးလို့ ဝေဖန်သူတွေကလည်း ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း နိုင်ငံရေးအားဖြင့်တော့ အင်မတန် လေးနက်တဲ့သဘောကို ဆောင်တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
ကုလ အထွေထွေညီလာခံ မြန်မာ့အရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ
၆၄ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံရဲ့ တတိယကော်မတီမှာ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေ တိုးတက်မှု မရှိတာကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက် မူကြမ်းတရပ်ကို ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့နဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံက ဦးဆောင်ပြီး တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အထွေထွေညီလာခံရဲ့ တတိယ ကော်မတီမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အချေအတင် ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက် အခုနောက်ဆုံး ထောက်ခံမဲ ၉၂ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၂၆ မဲ၊ ကြားနေမဲ ၆၅ နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်လိုက်ပါပြီ။
မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အစဉ်အလာအတိုင်း ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးလေ့ရှိတဲ့ ရုရှားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေ အပါအ၀င် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ ဒီလို တနိုင်ငံချင်း သီးခြား ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်တာဟာ မသင့်လျော်ဘူး ဆိုတာကို အဓိက အခြေခံပြီး လက်မခံခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခွင့်ပေးခဲ့တာ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်နေတာတွေကို လျစ်လျူရှုထားတယ် ဆိုပြီးတော့လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် အပါအ၀င် ကန့်ကွက်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကို လက်မခံခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံခဲ့ကြသူတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂,၀၀၀ ကျော် ရှိနေတာ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတာ၊ အထူးသဖြင့်ကတော့ ရှေ့လာမယ့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပမယ့်အချိန်မှာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့၊ အားလုံး ပါဝင်နိုင်ခွင့် မရှိသေးတဲ့ အခြေအနေတွေကို ထောက်ပြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ မဲပေးခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
ဗိုလ်တထောင် ဘုရားရှိ နတ်ရုပ်များထဲမှ အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံ ဆင်မြန်းထားသော မြနန်းနွယ်ရုပ်တုကို ည ၁၁ နာရီခန့်တွင် လက်ထိပ် လာခတ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါဘုရားအနီး နေထိုင်သူတဦးက ပြောသည်။
ဗိုလ်တထောင်ဘုရားရှိ မြနန်းနွယ်ရုပ်တုအပြင်၊ မင်္ဂလာဒုံ လှော်ကားကန်ထိပ်ရှိ ဘုရားစေတီဝင်းအတွင်းမှ မြနန်းနွယ်ရုပ်တုကိုလည်း ဘုရားရှင်ဘက်သို့လှည့်၍ လက်အုပ်ချီထားသော လက်နှစ်ဘက်ကို ပူးပြီး
လက်ထိပ် လာခတ်ကြောင်း လှော်ကားကန်ဝင်းအတွင်းမှ ၀န်ထမ်းမိသားစုများက ပြောသည်။
“တနေ့က မနက်အစောကြီး ဘုရားဝင်းထဲ ဆွမ်းလာကပ်တော့ မြနန်းနွယ်အရုပ်မှာ အရောင်လဲ့လဲ့နဲ့ ဘာလဲ ဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့မှ လက်ထိပ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်၊ ပထမတော့ ကလေးတွေ နောက်တယ်လို့ ထင် လိုက်သေးတာ၊ လက်ထိပ်ကိုကိုင်ကြည့်တော့ လက်ထိပ်က အကောင်းကြီးဆိုတော့လေ တခုခုပဲလို့ သိလိုက်တာ”ဟု အထက်ပါ ၀န်ထမ်း မိသားစုဝင်တဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဘုရားဝင်းအတွင်းရှိ မြနန်းနွယ်ရုပ်တုကို ညတွင်လက်ထိပ်ခတ်ထားပြီး နေ့ခင်းပိုင်းတွင် လက်ထိပ် လာဖြုတ်ပေးလေ့ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရကြောင်းလည်း ဘုရားဝင်းအနီးတွင် နေထိုင်သူများက ပြောဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ မြနန်းနွယ်နတ်ရုပ်တုများကို လက်ထိပ်ခတ်ခြင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအား အိပ်မက်ဆိုးပေး သောကြောင့် အပြစ်ပေးသည့်အနေနှင့် ဖြစ်သည်ဟု အစရှိသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ခံများကြားတွင် အမျိုးမျိုးပြောဆို လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ရယ်စရာတော့ကောင်းတယ်၊ ကြားရတာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို အစ်မတော်မြနန်းနွယ်က အိပ်မက် ဆိုးပေးလို့ ဆိုပြီး မြနန်းနွယ်ရုပ်တုတွေကို လိုက်ပြီးလက်ထိပ်ခတ်တာလို့လည်း ပြောကြတယ်၊ နောက်တမျိုး ကြားရတာကအိမ်မက်ထဲမှာတဲ့ အစိမ်းရောင်ဝတ်ထားတဲ့ ချောမောလှပတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးက ဒေါသ တ ကြီးနဲ့ ခပ်စိမ်းစိမ်းကြည့်လို့တဲ့ ပြောတယ်၊ ပါးစပ်ကလည်းပြောတယ်တဲ့ အဲဒါနဲ့ မြနန်းနွယ်ရုပ်တုကို လာပြီး လက်ထိပ်ခတ်လိုက်တာလို့လည်း ပြောကြတယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ ကုန်သည်ကြီးတဦးကလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမိသားစုကို အစိမ်းရောင်ဝတ်ထားသော အမျိုးသမီးကဒုက္ခပေးလိမ့်မည်ဟု ဗေဒင်ဟောသောကြောင့် ယတြာချေသည့်အနေဖြင့် အစိမ်းရောင် မြနန်း နွယ်ရုပ်တုများအားလိုက်လံပြီး လက်ထိပ်ခတ်ဖမ်းဆီးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုကြားသိရကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို အစိမ်းရောင်ဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတဦးက ဒုက္ခပေးလိမ့် မယ်၊ အဲဒီအမျိုးသမီးကြောင့် အရှက်ကွဲမယ်၊ အာဏာစွန့်ရမယ်လို့ ဗေဒင်ကဟောလို့ အစိမ်းရောင် အမြဲဝတ် တဲ့ မြနန်းနွယ်ကို ဦးအောင်လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ဖမ်းလိုက်တာလို့လည်း ပြောကြတယ်၊ အမျိုးမျိုး ပြောနေကြ တာပဲ၊ ဘယ်ဟာ အမှန်လဲတော့မသိဘူး”ဟု ယင်း ကုန်သည်ကြီးက ဆိုသည်။
ထို သိုက်နန်းရှင် မြနန်းနွယ်မှာ သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး လူယောင်ဖန်ဆင်း၍ သွားလာတတ်ကာ ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက် စသည့် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်သောကြောင့် ကိုးကွယ်သူ များပြားကြောင်း သိရှိရသည်။
“မြနန်းနွယ်က ဒီအစိုးရခေတ်မှာ ထင်ရှားလာတဲ့ သိုက်နန်းရှင်ပဲ၊ ၁၉၈၉ နောက်ပိုင်းလောက်မှာ မြနန်းနွယ် ဆိုပြီး အစိမ်းရောင်ဝတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက် မြန်မာပြည်အနှံ့သွားပြီး ဘုရားတည်နေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပြန့်လာတယ်၊ သိပ်မကြာခင် သူတည်တဲ့ ဘုရားတွေမှာသူ့ ရုပ်တုတွေ ပေါ်လာတာပဲ၊ အစိုးရ ကလည်း ဒါကို သိတယ်၊ မြနန်းနွယ်အိပ်မက်ပေးလို့ဆိုပြီး ဘုရားတွေမှာ သူ့ရုပ်တုတွေ ထည့်တာကို ခွင့်ပြု ပေးခဲ့တယ်၊ ခုတော့ အိပ်မက်ဆိုး ပေးလို့ဆိုပြီး ရုပ်တုတွေကို လက်ထိပ်ခတ်တာ”ဟု အစိုးရ အရာရှိကြီး တဦး ကလည်း ပြောဆိုသည်။
[အဟေးဟေးဟေး...ဖတ်ရင်းက အူတက်လို့သေတော့မယ်.......ကိုင်း....ဘယ်နှယ့်ရှိစ၊ မြန်မာပြည်က မိန်းကလေးသယ်ရင်းတွေ...အစိမ်းရောင်ဝတ်ချင်ရင် သတိသာထားကြပေရော့... အရူးဖမ်းတာခံနေရဦးမယ်.........]
Posted by ကိုကိုနာရ်ဂစ် at 7:47 AM0comments Links to this post
Posted by flyingpeacock at 10:00 AM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ထံ ပေးပို့တဲ့ စာထဲမှာတော့ တိုင်းပြည်အကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့သာမက သူမ ဦးဆောင်တဲ့ အဓိက အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီကြီးတခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီလိုတွေ့ဆုံရာမှာ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေသာမက သူ့လိုပဲ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ တောက်လျှောက်ဆိုသလို ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ NLD ပါတီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါ တွေ့ဆုံခွင့်ပြုဖို့ ပြောဆိုခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်အထိကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်အပေါ် စစ်အစိုးရဘက်က တစုံတရာ တုံ့ပြန်တာမျိုးတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ( ဗွီအိုအေ )
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထူးကြေငြာချက်အမှတ် ( ၈ / ၁၁ / ၀၉ )
Posted by flyingpeacock at 12:16 PM0comments Links to this post
ဘလော့ဂါ၊ ယင်း၏ဖြစ်တည်မှု နှင့် မီဒီယာသစ်
Blogger, It's Existence and New Media
Blogger, It's Existence and New Media 2
Posted by flyingpeacock at 11:47 AM0comments Links to this post
Posted by flyingpeacock at 6:43 PM0comments Links to this post
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ တရားဝင်မဖြစ်နိုင်
မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ အတိုက်အခံပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမလုပ်ဘဲ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားဝင်ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် (Hillary Clinton) က သောကြာနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ APEC အာရှပစိဖိတ် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရေးအဖွဲ့ ထိပ်သီး ညီလာခံကို လာတက်မယ့် သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမား (Barack Obama) နဲ့ မတွေ့ဆုံခင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့မှာ ၀န်ကြီး ကလင်တန်က ဗွီအိုအေနဲ့ သီးခြားတွေ့ဆုံပြီး အခုလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။ ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကို မြန်မာစစ်ခေါင်းတွေလည်း တက်ရောက်နေတာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေသတင်းထောက် David Gullust မနီလာမြို့ကနေ သတင်းပေးပို့ထားတာကို ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ရှေ့သီတင်းပတ် အစောပိုင်း စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် စစ်အစိုးရက ထိန်းချုပ်ထားတာတွေ လျော့ချပေးရေးအပါအ၀င် ထူးခြားသိသာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားကိစ္စတွေ အပါအ၀င် အမေရိကန်အဆင့်မြင့် သံတမန်နှစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြီးခဲ့တဲ့ သွားခဲ့တုန်းက တမူထူးခြားစွာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံလိုက်တာတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေရှည် ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ မျှော်လင့်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေစဉ်အတွင်း စစ်အစိုးရ အရာရှိတွေတင်မကပဲ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါ အကန့်အသတ်မရှိ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ကြတယ်လို့ ဗွီအိုအေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ မေးမြန်းခန်းမှာ ၀န်ကြီး ကလင်တန်က ပြောပါတယ်။
"ကျမတို့နဲ့ သူတို့အကြားမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အမြင်ချင်း ဖလှယ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒုတိယအချက် အနေနဲ့ကတော့ - ကျမတို့ရဲ့ သံတမန်အဖွဲ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စောင့်ကြည့်ခံရမှုမရှိဘဲ ၂ နာရီလောက် တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့တာကလည်း ထူးခြားပြီး အင်မတန် အထောက်အကူပြုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ သံတမန်အဖွဲ့ဟာ အတိုက်အခံပါတီနဲ့ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်း တွေ့ခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံမှုတွေဟာ တခြား ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ သွားတဲ့အခါ သတင်းတွေထဲမှာ ကျမတို့ တွေ့နေရသလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပိုပြီး ပွင့်လင်း ပြည့်စုံတဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွေပါ။"
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ APEC ခေါ် အာရှပစိဖိတ်ဒေသ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ထိပ်သီးညီလာခံကို လာတက်နေတဲ့ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ ၀န်ကြီးကလင်တန် သွားရောက် ပူးပေါင်းတွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစည်းဝေးပွဲ ပြင်ပမှာ တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင် ကျင်းပမယ့် အာဆီယံ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများအသင်းနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ စည်းဝေးပွဲကို သမ္မတအိုဘားမားနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် တို့လည်း တက်ရောက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရအကြား သီးခြားတွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတာ မရှိပေမယ့် စည်းဝေးပွဲအတွင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်နဲ့ ပြောဆိုမှုတော့ ရှိကောင်းရှိမယ်လို့ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ ၀န်ကြီး ကလင်တန်တို့ နှစ်ယောက်စလုံးက ပြောထားပါတယ်။
တကယ်လို့ ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်နဲ့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ် ပွင့်လင်းတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာရေး လုပ်ဆောင်ဖို့ ထပ်ပြီး ဖိအားပေး ပြောကြားသွားမယ်လို့ ၀န်ကြီး ကလင်တန်က ပြောပါတယ်။
"ကျမတို့ရဲ့ သံတမန် ၂ ဦးဖြစ်ကြတဲ့ အရှေ့အာရှရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ့တ် ကမ်ဘဲလ် (Kurt Campbell) နဲ့ ဒုတိယ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စကော့ မာဆီရဲလ် (Scot Marciel) တို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားတုန်းက ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်း အရာကိုပဲ ကျမအနေနဲ့ ထပ်လောင်း ပြောရမှာပဲ။ အဲဒါကတော့ အမေရိကန်အစိုးရက မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရအနေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ မလုပ်ဘဲ၊ တရားမျှတပြီး ယုံကြည် စိတ်ချရလောက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာအောင် အခြေအနေတွေ ဖန်တီးမပေးဘဲ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပမယ်ဆိုရင် အဲဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားဝင် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူတို့ သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးတာ အပါအ၀င် ထူးခြား သိသာတဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ မလုပ်ဆောင်ရင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ကုန်သွယ်ရေး ပိတ်ဆို့မှု အပါအ၀င် တခြား ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကို အမေရိကန်အစိုးရ အနေနဲ့ ရုတ်သိမ်းပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ၀န်ကြီး ကလင်တန်က ပြောပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်ထားတာတွေ လျော့ချရေးအပါအ၀င် တခြား သိသာ ထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ စစ်အစိုးရဖက်က ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိမ့်မယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ မထင်ဘူးတဲ့အကြောင်း သောကြာနေ့အစောပိုင်းက ဖိလစ်ပိုင် ကျောင်းသားတွေ၊ သတင်းထောက်တွေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ၀န်ကြီး ကလင်တန်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံကို စတင်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ဟာ သမိုင်းရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ဘက်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ယုံမှား သံသယဖြစ်စရာ မရှိပါဘူးတဲ့၊ ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ရာမှာ အချိန်ယူပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ယူရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီက အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် စစ်အစိုးရက အာဏာလွဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်း မရှိတဲ့အပြင် ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့ကာလက များပါတယ်။
စစ်အစိုးရနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူ ချမှတ်ခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကို ဖိအားပေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ သမ္မတ အိုဘားမားအစိုးရရဲ့ မူဝါဒသစ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထောက်ခံတယ်လို့ ပြောဆိုကြောင်း အမေရိကန်အဆင့်မြင့် အရာရှိတွေက ပြောကြပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
ဒီကနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အမှု အယူခံပြင်ဆင်ချက် တရားရုံးချုပ်ကို တင်သွင်းလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်း ပြောပြခဲ့တာပါ။ ( ဗွီအိုအေ )
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကြေငြာချက်အမှတ် ၂၈ / ၁၁ / ၀၉
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၈၉ နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အခမ်းအနား
Posted by flyingpeacock at 9:32 PM0comments Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ယူကီအို ဟတိုယာမ (Yukio Hatoyama) က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ရှေ့နှစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းတကျ ကျင်းပသွားတာကို ဂျပန်က မြင်လိုကြောင်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဟာ အင်မတန် အရေးကြီးကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ကို ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ဟတိုယာမက ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုကျိုမြို့တော်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်နဲ့ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်တို့ စနေနေ့က ဘေးထွက်ဆွေးနွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ အမေရိကန် အစိုးရကြားမှာ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ လုပ်လာတဲ့ အပေါ်မှာလည်း ဂျပန်က ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေလှမ်းရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လူသားချင်း စာနာတဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေကို ဂျပန်က တဖြည်းဖြည်း တိုးပေးသွားမယ်လို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ၂၀၀၃ ခုနှစ် ကတည်းကဆိုရင် ပထမဆုံး လာရောက်တဲ့ မြန်မာခေါင်းဆောင်တယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက လူသားချင်း စာနာမှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကူအညီတွေကို ပေးနေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ပေးခဲ့တဲ့ ထောက်ပံ့ကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃ သန်းကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အမေရိကန်သံတမန်အဖွဲ့ တွေ့ဆုံမှု့ ရုပ်သံသတင်း
Posted by flyingpeacock at 1:02 PM0comments Links to this post
နိုင်ငံကျော် မင်းသား ကျော်သူ အသက် ၅၀ ပြည့် မွေးနေ့ကျင်းပ
ကာ့တ် ကမ်းဘဲလ် မြန်မာခရီးစဉ်ဆိုင်ရာ ကြေညာချက် ထုတ်
မြန်မာနိုင်ငံကို ၂ ရက်ကြာ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ့တ် ကမ်းဘဲလ် (Kurt Campbell) ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက မထွက်ခွာခင် ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြေညာချက် အသေးစိတ်ကို မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ အမေရိကန်သံရုံးက တဆင့် ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ၂ ရက်တာ ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ အစိုးရပိုင်းက တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအ၀င် ပုဂ္ဂိုလ် အများအပြားနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်နေတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ မူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ သက်ဆိုင်တဲ့ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရှင်းပြဖို့နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ပြည့်ဝမှု၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်မှု၊ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးတို့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထောက်ခံကြောင်း ပြသဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ ခရီးစဉ်တခု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံမှုတိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာတဲ့ တိုင်းပြည်၊ ဒီမိုကရေစီကို မြှင့်တင် ဖော်ဆောင်နေတဲ့ တိုင်းပြည်၊ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ နျူကလီးယား မပြန့်ပွားရေး စာချုပ်အတိုင်း လိုက်နာနေထိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်တခုအဖြစ် အမေရိကန်တို့က မြင်လိုတယ်လို့လည်း အလေးအနက်ထား ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း ၂ နာရီကြာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတွေ့ဆုံမှုတွေ အတွင်းမှာ အစိုးရ၊ ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံနဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေကြားမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတရပ် ဖြစ်ဖို့လိုကြောင်း ထပ်မံပြီး အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုရဲ့ ဦးတည်ချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်တရပ် အပြည့်အ၀ ဖော်ဆောင်ရေးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဦးတည်ချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း သူ့ရဲ့ NLD ပါတီ CEC အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မကြာခဏ တွေ့ဆုံပေးသင့်တယ်လို့လည်း စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
စစ်အစိုးရရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး၊ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀န်ကြီး၊ စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ အခါမှာတော့ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် အမေရိကန်တို့က အဆင်သင့် ရှိနေကြောင်းနဲ့ ဒီကိစ္စကို နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်သလို မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကလည်း ထိထိရောက်ရောက် ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုတွေ လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည် ကူညီရေး၊ ကူးစက်ရောဂါ ပြန့်ပွားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကူညီရေး ကိစ္စတွေကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ့တ် ကမ်းဘဲလ် မြန်မာနိုင်ငံက မထွက်ခွာခင် ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကာ့တ် ကမ်းဘဲလ် ကြေညာချက်ထဲမှာပါတဲ့ တောင်းဆိုချက်တခု ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို NLD CEC တွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်အတိုင်း စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တခြား NLD ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ပေးဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ ပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး မပါဝင်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ စစ်အစိုးရ သတင်းတွေမှာ ကြေညာသွားပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်က အခုလို မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင် ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
NLD ၏ CECအဖွဲ့နှင့် အမေရိကန်သံတမန်အဖွဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
Posted by flyingpeacock at 9:14 AM0comments Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၂၀၀၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ ကြေငြာချက်
Posted by flyingpeacock at 8:59 AM0comments Links to this post
ဒီချုပ်ရန်ကုန်ရုံးခွဲ ဖွင့်ခွင့်ပြန်ရလိမ့်မည်ဟု အကောင်းမြင် မျှော်လင့်နေ
သူနှင့်အတူ သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အများကို ရန်ကုန်မြို့လယ် ဆူးလေဘုရားအနီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် တိုင်းရုံးသို့ ခေါ်ယူပြီး ယခုထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ပါတီဝင်စာရင်းကို သူတို့ထံ တင်ပြရန် ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဒီချုပ် ရန်ကုန်တိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက မဇ္ဈိမကို ယနေ့ ပြောသည်။
''ဒီချုပ် ရန်ကုန်တိုင်းက ကော်မတီဝင် စာရင်းအသစ်ကို သူတို့ဆီတင်ဖို့ သူတို့ (ကော်မရှင်) က ကျနော်တို့ကို ပြောတယ်။ ဒီလိုတင်ပြီးရင် နောက်ထပ် ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးမယ်တဲ့'' ဟု ဒေါက်တာ သန်းငြိမ်းက ပြောသည်။
၂ဝဝ၃ ခုနှစ်က အပိတ်ခံခဲ့ရသော ရုံးကို ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံလွှာကို ဒီချုပ် ရန်ကုန်တိုင်းက ပြီးခဲ့သည့်လဆန်းတွင် တင်သွင်းခဲ့သည်ဟု သူက ပြောသည်။
''တခု ထူးခြားတာက ကော်မရှင်က အရင်တိုင်းစည်း အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေ နာမည်ကို မတောင်းဘူး။ အခုလက်ရှိ တာဝန်ယူနေတဲ့ တိုင်းစည်းကော်မတီတွေ နာမည်ပဲ တောင်းတယ်'' ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်က စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပါတီတွင် ယခုအခါ တိုင်းစည်းကော်မတီအတွင်း၌ အဖွဲ့ဝင် အတော်များများ မရှိတော့ပါ။ အချို့မှာ သေဆုံးသွားပြီး အချို့မှာ ပြည်ပသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ကြသည်။ အများအပြားမှာ ယခုတိုင် အကျဉ်းကျနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ယခင်ကမူ ရုံးများပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးရန် စည်းကော်မတီဦးရေ လုံလောက်အောင်မရှိဟု ဒီချုပ် အဖွဲ့ခွဲရုံးများကို အကြောင်းပြ ပြောကြားလေ့ရှိသည်ဟု ၁၁ နှစ်ကြာ အကျဉ်းကျခံခဲ့ရပြီး ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကမှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက ပြောသည်။
''ဒီတခါတော့ သူတို့က ဒါမျိုးမမေးတော့ဘူး။ လောလောဆယ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ စည်းကော်မတီစာရင်းသာ သူတို့ဆီ ချက်ချင်းတင်ပြဖို့ ပြောတယ်'' ဟု သူက ပြောသည်။
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းရုံးကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့်အတွက်လည်းကောင်း၊ တရားဝင် ပါတီတရပ်အနေဖြင့် ရုံးတွင် ပါတီလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည့်အတွက် လည်းကောင်း၊ ရုံးပြန် ဖွင့်ခွင့်ပြုရန် ဒီချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းရုံးက မေတ္တာရပ်ခံစာတစောင်ကို ပြီးခဲ့သည့်လဆန်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။
၁၉၉ဝ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲများပြီးလျှင် စစ်တန်းလျားသို့ ပြန်ပါမည်ဟု ကတိပေးထားခဲ့သော စစ်အစိုးရသည် ဒီချုပ်က အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ယင်းအစား ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဌာနချုပ်ရုံးမှတပါး နိုင်ငံရေးပါတီ အားလုံးကို ဖျက်သိမ်းပြီး ရုံးအားလုံးကို ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
''ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးပေး အခုလို ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒါ အစိုးရအတွက်ရော၊ ကျနော်တို့အတွက်ပါ အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ အရာပဲလို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်'' ဟု သူက ပြောဆိုသည်။
မကြာသေးခင်ကလည်း စစ်အစိုးရသည် အထိန်းသိမ်းခံ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူမ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ အနောက်တိုင်း သံတမန်များနှင့် ရှားပါးစွာ တွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် သူမ၏ ပါတီကိုလည်း အမေရိကန်၊ ယူကေနှင့် သြစတြေးလျားနိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံခြားသံတမန်များနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် ပေးခဲ့သည်။
သူတို့၏ ခရီးစဉ်ကို အဆုံးမသတ်မီ အဆိုပါ သံတမန်နှစ်ဦးသည် လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၂ဝ အတွင်း ၁၄ နှစ်မျှ ပုံစံတမျိုး မဟုတ်တမျိုးဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသော နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ (မဇ္ဈိမ)